Cook Inoti Apple Kuona Kwekutengesa Kwakatyora Ruzivo muKutanga Svondo reZororo Kutenga | Ndinobva mac
Cook anoti Apple Watch kutengesa kwakatyora rekodhi muvhiki yekutanga yekutenga zororo
Zviripachena kuti kuziviswa kwese kwakanaka uye wachi yeCupertino yevakomana ndeimwe yeanopfeka ayo akaisa mari kwazvo mairi. Muchokwadi, Apple ichiri imwe yemakambani eetekinoroji pamwe chete neSamsung vanoshandisa mari yakawanda kushambadzira kune avo mashandisiro.
Mangwanani ano isu tatoona nhau ine chekuita newadhi yeApple uye ndizvozvo smartwatch iyi inobatana nemimwe midziyo inowanikwa mu marara chirongwa. Zvino zvatiri kutaura ndezvekuti wachi iyi yakaputsa rekodhi rekutengesa sekusimbiswa nemukuru weApple, Tim Cook. Pakati pevhiki ino inotanga mushandirapamwe weKisimusi zvinoita sekudaro Apple wachi ingadai yakawana zvinoshamisa manhamba ekutengesa.
Zvinotaridza kushamisa kuti Cook anoenda munzira yake achiti kutengesa kwewachi kunowana rekodhi yekutengesa, asi zviri zvekuti mimwe mishumo yakayambira kuti kutengesa kwewachi kwakadonha ne5%, pamwe chete nenhamba dzakaipa dzakafanotaurwa neIDC uye izvi hazviratidzike kwaari iye CEO wefemu akafarira uyo akauya kumberi neemail yakatumirwa paReuters umo maanotaura nezve nyowani rekodhi yakawanikwa.
Kukura kwekutengesa kuri kuburikidza nedenga remba. Muchokwadi, mukati mevhiki rekutanga rekutenga kweKisimusi, yedu yakananga Apple Kutengesa kutengeswa kwakakwirira kupfuura mumamwe masvondo ese munhoroondo yechigadzirwa. Uye sezvataitarisira, isu tiri munzira yekuwana yakanakisa kota munhoroondo yaApple.
Ichokwadi kuti iyo mhando haina kuburitsa yakatarwa dhata pamusoro pekutengesa kwewachi kusvika zvino uye inogona kuzviita mukota inotevera nekuda kwenhau iyi. Chero zvazvingaitika, zvatiri kujekesa nezvazvo iyo Apple Watch ndeimwe yemidziyo mishoma iri kubata tug pamawatch akangwara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Cook anoti Apple Watch kutengesa kwakatyora rekodhi muvhiki yekutanga yekutenga zororo
Kudzidza kushandisa akasiyana-siyana pachiratidziro zvinoshandiswa neyakaganhurirwa skrini chishandiso
Apple inobhejera pane yayo webhusaiti ye 3D kudhinda, iro ramangwana rekudhinda